पाल सरकारले अनुदान बापतको रकम निकासा गर्न वर्षौ लाग्ने भन्दै बीमालाई प्राथमिकता नदिन बीमा कम्पनीहरुको आन्तरिक सर्कुलर ? - Aathikbazarnews.com पाल सरकारले अनुदान बापतको रकम निकासा गर्न वर्षौ लाग्ने भन्दै बीमालाई प्राथमिकता नदिन बीमा कम्पनीहरुको आन्तरिक सर्कुलर ? -
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना शाखा कार्यालयहरुलाई कृषि तथा पशु बीमालाई खासै प्राथमिकतामा नराख्न आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपाल सरकारले अनुदान बापतको रकम निकासा गर्न वर्षौ लाग्ने भन्दै उनिहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई कृषि बीमाको लागि जोड निदिन निर्देशन दिने गरेको पाइएको हो ।
कार्यक्रममा अधिकाम्स कर्मचारीहरुले कोरोना बीमाको विषयलाई लिएर धेरै नै समस्या सिर्जना भएको बताएका थिए । उनिहरुले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी छिटो भन्दा छिटो सेटल गरिदिन अनुरोध गरेका छन्
बिओकेका सिइओको तलब २ करोड ३२ लाख
राजश्व छली गरेको भन्दै ६ कम्पनी विरुद्ध मुद्दा